सडकका खाल्टो पुर्ने कसले ? – Chitwan Post
सडकका खाल्टो पुर्ने कसले ?
सरकार प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापामा दुई अर्ब ५० करोड रूपैयाँको बजेट खर्चेर ‘भ्यू–टावर’ बनाउन तम्सिएको छ । ‘भ्यू–टावर’को गत वर्ष स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै शिलान्यास गरेका थिए । रेल र पानीजहाज कुदाउने त सरकारको प्रमुख एजेन्डा नै भइहाल्यो । आर्थिक समृद्धि र विकास सरकारको मूलनारा छँदैछ । सरकार यति ठूलो मह¤वाकांक्षाका साथ अगाडि बढ्दै गर्दा जनता भने सडकको खाल्टाखुल्टीबाट आजित भइरहेका छन् । काठमाडौँ खाल्टोको त कुरै गर्नु परेन । देशको प्रमुख राजधानी काठमाडौँमा खाल्टोमा परी कति गाडी डुबे, कति बालबालिकाले प्राण त्यागे, कति दुर्घटना भए ? त्यसको फेहरिस्त लामो हुनसक्छ । काठमाडौँमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि खनिएका खाल्टा अझै पुरिएका छैनन्, ढल र अन्य प्रयोजनले खाल्टा खन्ने क्रम पनि जारी छ । कम से कम ठूला आयोजनाका काम नभए पनि सडकका खाल्टोसम्म पुरिए कोही पनि अकालमा मर्नुपर्ने थिएन र साँझ–बिहान ढुक्कसँग हिँड्डुल गर्न सकिने थियो भन्ने खाल्टोपीडित महानगरवासीको अपिल छ । तर विडम्बना ! सडकको खाल्टो पुर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशन दिँदासमेत खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम हुन सकेन । देशको कार्यकारी प्रमुखको निर्देशनको समेत बेवास्ता हुन्छ भने देशभर भत्किएका सडकको हविगत के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजधानी काठमाडौँको खाल्टाखुल्टीको समस्या तत्काल समाधान हुन नसक्नुको दोष मेलम्चीको पाइप बिच्छ्याउने कार्यलाई दिन सकिएला । तर, देशका अधिकांश प्रमुख सडकमा देखिएका खाल्टो पुर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? सम्बद्ध निकायले किन चासो देखाएको छैन ? खाल्टो पुर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका निकायको लापर्बाहीका कारण जनता अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका छन् । विगत एक महिनायता सडकका खाल्टोमा दुर्घटना भएर कति मानिस मरे ? कति घाइते भए ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? बर्खाको समयमा बर्सादका कारण सडकमा खाल्टाखुल्टी पर्ने र भत्किने क्रम चलिरहन्छ । तर सडक विभाग, सडक डिभिजन कार्यालय वा स्थानीय तहले सम्भाव्य दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अल्पकालीनरुपमा भए पनि सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्न चासो दिनुपर्ने हो, तर कोही पनि जिम्मेवार नहुँदा खाल्टोमा जो जाकिन्छ असर उसैलाई मात्र पर्छ भन्ने मानसिकता हाबी भएको छ । यतिखेर पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको सडकको दुर्दशा हेर्दा मुलुकमा तीन तहको सरकार क्रियाशील छ भनेर अनुभूति गर्न गाह्रो पर्छ । सडकमा खाल्टोकै कारण हरेक दिन साना–ठूला दुर्घटना भइरहेका छन् । दुर्घटनामा मानिस नमरे दुर्घटनाजस्तै नलाग्ने मानसिकताका कारण सरोकारवालालाई खाल्टोको समस्या त्यति ठूलो नलागेको हुनसक्छ, योभन्दा ठूलो दुर्भाग्यचाहिँ अरु केही हुन सक्दैन ।
सामान्यतः खाल्टाखुल्टीको समस्या त्यति ठूलो होइन । तर, खाल्टोकै कारण दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकाले समयमै खाल्टो पुर्ने तत्परता देखाउनु आवश्यक हुन्छ । खाल्टाखुल्टी पुर्न तत्परता देखाउने हो भने त्यो सम्भवतः एक÷दुई दिनमै सकिने काम हो । सडक पुनःनिर्माणको काम त बर्खामा गरिनु प्रभावकारी हुँदैन, जसको उदाहरण त असारे विकासले प्रमाणित गरिसकेको छ । सडक टालटुल पारेरै भए पनि कम से कम यो बर्खाको समयमा सम्भाव्य दुर्घटनाबाट बचाउन सम्बद्ध निकाय जिम्मेवार होऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सडक निर्माणका क्रममा लापर्बाही नभएको भए यतिचाँडै सडकमा खाल्टो पर्ने थिएन । कमसल सामग्रीको प्रयोग गर्ने र सडक निर्माणमा हेलचेक्र्याइँ गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने नैतिक जिम्मेवारी बाँकी नरहेकै कारण जनता खाल्टोमा डुबेर मर्नुपर्ने, खाल्टोमै जाकिएर दुर्घटनामा पर्नुपर्ने नियति छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तीन तहका सरकार र राज्य पुनर्संरचनाका जिम्मेवार निकायले खाल्टो पुर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ । र, सम्बन्धित निकायले तीन महिनामै खाल्टो पर्ने सडकको अनुगमन गरी ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने पद्धति निर्माण हुनसके जनताको आशा निराशामा परिणत हुनेछैन ।
खैरहनीको पर्सामा वाने वे पार्किङ